Wareeydii Siilaanyo ee Shirka London iyo Where is my three Minutes. | Anti-Tribalism
← Halkaan hoos ka daawo MASAAFADA u dhexeeysa halka nalaka rabo iyo halka aan joogno oo ay u dhexeeyso fogaan malaayiin sanadoo ah (Light years)
Wareeydii Siilaanyo ee Shirka London iyo Where is my three Minutes.
24 Febaury 2012 (Moment Media Group)-Inkastoo taageerayaasha Maamulka Somaliland ka dhigeen London dibadbaxyo balaaran oo ay ku muujinayeen rabitaankooda la xiriira in loo aqoonsado dal ka madaxbanaan Somalia hadana Madaxweynahooda Ahmed Siilaanyo ayaa wejigabax iyo farxad daro kala kulmay Shirkii shalay 23 February 2012 lagu qabtay Lancester House London.
Ahmed Siilaanyo wuxuu hore taageerayaashiisa ugu sheegay inuu Shirka London ku leeyahay khudbad qadarkeedu yahay sedex daqiiqo hasse yeeshee markii uu garwaaqsaday in la gunaanaday Khudbadahii Shirka ayuu isku heyn kari waayay kursiga wuxuuna cod dheer ku yiri “Where is my three Minutes”
Madaxda Dowladda Ingiriiska ee shirka joogtay uma jawaabin laakiin waxay Kaamirada qabatay iyadoo nin ka mida Ciidamadda amaanka ku leeyahay “Be Patient sir”
Ahmed Siilaanyo iyo xubnaha la socday oo markii hore ka carooday Khudbadii Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton oo tiri “Mareykanka waa 50 gobol oo Federal ah,waana hal dal sidaas darteed waxaanu taageereeynaa Midnimada Somalia” ayey xaraarada xanaaqiisu gaartay heer laga akhrisan karay wejigiisa.
Markii wejigii hore ee shirka dhamaaday oo masuuliyiinta ka qeybgalayay isu taageen inay galaan sawir xasuuseedka loo yaqaan PHOTO GROUP ayey Kaamirada qabatay Siilaanyo oo ka cararaya halkii uu la taagnaa Madaxweyneyaasha Puntland iyo Galmudug .
David Cameron oo u muuqday qof maahsan ayaa isku dayay inuu salaamo Ahmed Siilaanyo laakiin Siilaanyo oo hoos eegayay ayaa gacantii soo taagneed ka laabtay gacanta,wuxuuna galay dhabarka dambe ee Ra’isulwasaaraha Ethiopia Melles Zenawi.
Xubnahii la socday Madaxweynaha Somaliland oo garwaaqsaday inay meesha ka baxday rajadii ay ka qabeen inuu Khudbeeyo Sillaanyo ayaa bilaabay inay Masuuliyiinta ka qeybgaleeysay Caalamka u qeybiyaan khudbadii uu Siilaanyo doonayay inuu ka jeediyo shirka.
Sidii lagu yaqiin ,Wasiir Khaarajigiisa Mohamed Bajaaj iyo Afhayeenkiisa Cukuse ayaa qoraalkii khudbada lagu hungoobay u qeeybiyay Saxaafada Somaliland,iyagoo Website-yadooda ku hardhay Akhriso Khudbadii Madaxweynaha SOMALILAND ka jeediyay Shirkii London.
Website-ka Wargeyska Waaheen ee ka soo baxa Hargeysa ayaa la soo dhigay war ciwaan looga dhigay “MADAXWEYNE SIILAANYO OO FURSAD UU KU HADLO WAAYAY SHIRKII LONDON”
Wargeyska Waaheen oo mararka qaar adeegsado erayo qaldan oo la rumeeysan yahay inuu ku qanciyo rabitaanka dadka akhristo ,dhinaca kale marka laga eego waa Wargeys faafiya warar iyo warbixino run u badan.
Wargeyska Waaheen oo ka hadlayay balanqaadyada iyo beenta joogtada noqday ee xerta Siilaanyo wuxuu wejigiisii hore ee maanta ku qoray erayadaan:- “Waxay xukuumadda Somaliland balanqaaday inay shirkaa aduunku isugu imanayo ku soo bandhigi doonaan qadiyadda Somaliland. May dhicin. Imikanna waxay ku hawlan tahay inay dadka ka dhaadhiciso inay khudbad taariikhiya meesha ka jeedisay. Lamana hayo? BBC-daa hawada naga saartay iyo waxaan meesha qabanayn bay la shir timid. Haddii uu madaxweynuhu hadlay, wuxuu ka hadlay, goob farsamayaqaanadda (technocracts) loo baneeyey oo madaxdii ka baxday oo aan warbaahinta aduunka macno u samaynayn, sida aqliga iyo aqoontu ina siinayso. BBC-na hawada kamay saarin eh, muhimaddii shirka ayaa dhamaatay. Waa haddii ay dhacdayba, haddii ay dhacday RECORD muuqaal iyo qoraal ba ah ayaa jira ee ha raadiso Wasaaradda khaarajigu oo dadka ha u soo bandhigto. Laakiin waxa caddaan ah inaan Madaxweynaha Khudbad ka jeedin meesha Madaxda fadhiday” .
Ahmed Siilaanyo ayaa khudbad ka jeediyay Shirka London waxay la mid tahay dacaayada ay kooxdiisa internetka gashteen ee lagu sheegay inuu David Cameron la qaatay shir socday afar saacadood.
Inkastoo Xafiiska Ra’isulwasaare David Cameron beeniyay sheegashadooda hadana Ra’isulwasaaraha Ingiriiska xitaa halsaac lama shiro dhigiisa dalka Faransiiska maxaa yeelay in waqtigu qaali yahay maanta waxaa tusaale kuugu filan in Shir Caalamka oo dhan la iskaga yimid looga hadlay shan saacadood oo qura.
Video Waagacusub Tv ka duubay Ahmed Siilaanyo iyo xubnaha la socda ayaa laga dheehan karaa sida Madaxweynaha Somaliland loogu bahdilay Albaabka laga galo xarunta uu ku yaal Xafiiska Ra’isulwasaraha Ingiriiska.
Film-ka oo aan ku faafinay barta Youtube.com wuxuu muujinayaa Ahmed Siilaanyo oo markii uu qaboowga taagnaa 45 daqiiqo kadib sankiisa diif ka yimid.
Wejigabaxa iyo werida Ahmed Siilaanyo ka raacday London lama oga dareenka ay naftiisa gelisay laakiin waxaa fadhi ku dirirada la isla dhexmarayaa WHERE IS MY THREE MINUTES.
Lama oga in Dowladda Ingiriiska balanqaadka siisay balse loogu diiday cadaadis ay Madaxweynayaasha Somalia iyo Jibouti ku laaleen inuu Siilaanyo khudbad ku yeelan karo Shirka London oo kale.
Website-ka halbeegnews.com oo ka mida Websiteyada Somaliland laga leeyahay ayaa qoray Warbixin dheer oo ciwaan looga dhigay “ Siilaanyo fadeexadii ugu weyneed ka qabsatay Shirka London”Halkaan ka akhri http://halbeegnews.net/?p=10276
Si kastaba ha ahaatee,Shacabka Somaliland oo 20 sano siyaasiyiin DANLEEYA u garaacayeen gurbaan beena waxay maanta joogaan xilligii ay Aayahooda Mustaqbal ka tashan lahaayeen.